UEFA oo ku Dhawaaqday 8 Ciyaartoy ee ku Tartami doona Xiddigii ugu Fiicnaa Kulamaddii Toddobaadkan ee Champions League
HomeChampions LeagueUEFA oo ku Dhawaaqday 8 Ciyaartoy ee ku Tartami doona Xiddigii ugu Fiicnaa Kulamaddii Toddobaadkan ee Champions League
08/12/2016 Samatar Mohamed
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa soo saartay liiska 8-da ciyaartoy ee ku tartami doona abaal-martinta xifdigii tofdobaadkan ugu fiicnaa kulamaddi Champions League ee heerka Group-yadda ugu danbeeyay.
Liiskan ayaa waxaa hogaaminaya xiddiga Arda Turan oo kulankii Camp Nou ee Borussia M’Glabach saddexlay (hat-trick) ka dhaliyey, si la mid ah xiddiga kooxda Arsenal ee Lucas Perez oo isna 3 gool ka dhaliyey kulankii FC Basel.
Waxa kale oo liiskan ku jira weerar yahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema oo kulankii xalay ee kooxda Borussia Dortmund 2 gool uga dhaliyey kooxdiisa Real Madrid.
Waxa kale oo liiskan ku soo baxay Lewandowski uu kooxdiisa Bayern Munich guul ku hogaamiyay kulankii Ateltico Madrid, si la mid ah Gonzalo Higuain oo gacan weyn ku lahaa kulankii Juventus kaalinta koowaad ku xaqiijisatay ee Dinamo Zagreb.
Laacibka Andre Silva oo kooxda Leicester City ku kala dhantaalay kulankii Porto iyo gool-dhaliyaha kooxda Tottenham Harry Kane oo kulankii CSKA Moscow.
Ugu dambeyntii, jamaahiirta kubbada cagta adduunka ayaa u codeyn doona xiddiga ugu ban-dhiga fiicnaa iyada oo xiddiga hela codka ugu baddan ay UEFA shaacin doonto in uu abaal-marrintan ku guuleystay.
Liiska 8-da Ciyaartoy ee ay UEFA Soo Saartay ee ugu Fiicnaa Kulamaddii Champions League: